देउवा पत्नी आरजू मन्त्री बन्ने ‘नो चान्स’ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०७, २०७३ समय: २:३१:४८
काठमाडौं /‘आरजू म्याडम नै मन्त्री बन्नुपर्छ, म्याडमले माननुभएन भने उहाँले छानेका महिला सांसदालाई नै मन्त्री बनाउनुपर्छ,’ ईश्वरी न्यौपानेसहित आधा दर्जन जति महिला सांसदहरुले अहिले कांग्रेसभित्र यसो भनिरहेका छन् ।
‘म्याडम आरजू’ अर्थात् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू देउवाले भने मन्त्री बन्ने आश मारिसकेकी छिन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ आरजूले मन्त्री बन्ने कसरत थालेकी थिइन्, तर देउवाले हिम्मत गरेनन् ।
जानकारहरु भन्छन्, ‘अब देउवाले हिम्मत गर्ने अवस्था पनि छैन र आरजू मन्त्री बन्ने चान्स पनि छैन । मनित्रमण्डलमा नाम नपठाएसम्म कांग्रेसमा यस्ता अनेक पाराका चाकडीचुक्ली देख्न सुन्न निरनतर पाइने भएको छ । तर, कांग्रेसले कहिलेसम्म नाम पठाउँछ ? यो भो अनुत्तरित छ । २०७३ भदौ६ गते सोमबार उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतबाट फर्किदैंछन् ।
उनी फर्किएपछि के सन्देश लिएर आउँछन् अनि मन्त्रिमण्डलमा नाम पठाउँछु भनेका छन् देउवाले । पहिलो देउवाले नेविसंघको महाधिवेशनपछि भने अहिले निधि फर्किएपछि भन्दैछन् ।अब कुनै बहाना देखाएर अरु केही दिन नाम नपठाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताइएको छ । आजको साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।